नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण ( आइतवार, बैशाख २२, २०७६)
कम्पनीले हाल ३० जिल्लामा ८४ शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमार्फत १ लाख ३३ हजार ४४ विपन्न घरपरिवारमा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले चालू आवको ९ महीनामा रू. ७ करोड ९७ लाख नाफा कमाएकोे छ । यो नाफा गत आवको तुलनामा १ सय १३ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड ७२ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य ७ अंक बढेर रू. ५ सय २ पुगेको छ । उक्त दिन कम्पनीको १ हजार १० कित्ता शेयर खरीद विक्री भएको छ ।
2019-05-05 - 63 view(s) - abhiyan